Corn Carnival series
BreadTalkers တွေမရိုးရအောင် အမြဲတမ်းအသစ်အဆန်းတွေထွက်နေကျ BreadTalk ကနေဒီတစ်ေခါက်မှာတော့ ပြောင်းဖူးကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Corn Carnival series လးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ… 🌽🌽🌽
ဒီ series လေးထဲမှာတော့ ပြောင်းဖူးအဓိကထားလုပ်ထားတဲ့ Cake လေးနှစ်ခုပါပြီး ဗနီလာအရသာလေးနဲ့ Vanilla Corn Cake လေးရယ်၊ ဆွမ်းမွှေးအနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ Pandan Corn Cake တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့ကစပြီး BreadTalk ဆိုင်ခွဲတွေမှာဝယ်ယူနိုင်ပြီမို့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေထဲက ပြောင်းဖူးကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေကိုလည်း mention ခေါ်ပြီး သတင်းကောင်းလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါဦးနော်...
BreadTalk never fails to create new products for BreadTalkers. This time let us introduce new Corn Carnival series to you. Good news for Corn lovers!!! 🌽🌽🌽 There will be two new Corn cakes - sweet tasty Vanilla Corn Cake and sweet fragrance of Pandan Corn Cake in this series. You can buy this new series starting from 26th September. So do not forget to grab this new series and do not forget to mention your Corn lover friends. 😋
#BreadTalkMyanmar #CornCarnival #Vanilla #Pandan #Cakes
Fruity Fiesta Series
ကဲ… BreadTalkers လေးတွေစောင့်မျှော်နေတဲ့ Fruity Fiesta မုန့်လေးတွေလာပါပြီ! ဒီ Fruity Fiesta series လေးကတော့ အသီးပါတဲ့ပေါင်မုန့်တွေစားရတာကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ရှယ်ပဲနော်။ ဒီ series လေးထဲမှာ အရသာဆန်းပြီး ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ Ingredients တွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ Fruity Danish (3) မျိုး၊ Bun ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် နာမည်အဆန်းလေးနဲ့ Bun (2) မျိုးရယ်၊ ဒူးရင်းချစ်သူတွေအတွက် Durian Bun (1) ခုနဲ့ Fruity Cake တွေကိုရှယ်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Fruity Cake လေး (2) မျိုးလည်းပါတယ်နော်။ ဒါတွေအပြင် အရမ်းတန်တဲ့ Promotion လေးတွေလည်းရှိတာမို့ သူများထပ်ဦးအောင် အပြေးလေးလာစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ သြဂုတ်လ (၉)ရက်နေ့ကနေ အောက်တိုဘာလ (၃)ရက်နေ့အထိ BreadTalk ဆိုင်တိုင်းမှာ အားပေးလို့ ရပါပြီနော်။
Finally, the most awaited day has come to BreadTalkers. Here comesaspecial "Fruity Fiesta" series for those who love to have fresh fruits made products. Made with fresh fruits including (3) new Danish, (2) Buns with surprise odd names, (1) Durian Bun for durian lovers and (2) delicious Cakes. Don't be out dated person! Go get & try our newly Fruity Fiesta series. Hurry Up & don't missachance to get special promotions! Please enjoy Fruity Fiesta from 9th August to 3rd October.
Matcha is Coming To Town!!!
ရေးးးးးး..... Green Tea ကြိုက်တဲ့ BreadTalkers တွေအတွက် Green Tea ကနေပြုလုပ်ထားတဲ့ "a Matcha Made in Heaven" Series အသစ်လေးဆိုင်တွေပေါ်ရောက်နေပါပြီနော်။ အသစ်အသစ်တွေကို သူများပြောမှမသိရလေအောင် ခုပဲအပြေးလေးလာမြည်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ မြည်းစမ်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ မစားရသေးတဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို သူ့ရဲ့ အရသာဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်း ဒီ Post လေးရဲ့ အောက်မှာ mention ခေါ်ပြီးပြောပြလိုက်ကြပါဦး။ Promotion လေးတွေလည်းရှိတာမို့ အပြေးလေးလာခဲ့လိုက်တော့နော်။ 🍃🥐🍃🥖🍃🍰🍃
Yaaaaay!!! Here comes ""a Matcha Made in Heaven"" series which is made of finely ground powder green tea leaves. Now you can buy these series in every outlets of BreadTalk. Don't be out dated person! Go get & try our newly Matcha series. Also mention and share your friends the fresh taste of your experiences. Hurry Up & don't missachance to get special promotions. 🍃🥐🍃🥖🍃🍰🍃
#BreadTalk #MatchaSeries #MadeinHeaven"
Choco Lava Croissant လေး BreadTalker တွေဆီပြန်ရောက်လာပါပြီ။ ပေါင်မုန့်သားမွမွလေးကိုကိုက်လိုက်တာနဲ့ အထဲကစိမ့်ထွက်လာတဲ့ ချော့ကလက်အရသာ... သူတို့နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစည်းမှုက ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်။
ကဲ... ဘယ်လိုမှမပြောတော့ဘူး ချောကလက်ကြိုက်တဲ့သူတွေတန်းသာစီထားလိုက်တော့... 🥐
Choco Lava Croissant is back to you!!! How could the taste of this Lava Croissant? It will give youacombination of flaky texture and bittersweet taste of chocolate comes out from the croissant. Any Chocolate Lovers out there? 🥐
#BreadTalk #ChocoLavaCroissant #ChocolateLovers
Oishii! Oishii! Oishii!
BreadTalkers တွေအားလုံး စောင့်မျှော်နေတဲ့ Oishii Japan Series လေးလာပါပြီ!!🤩
Oishii Japan Series ထဲမှာတော့ တမူထူးခြားဆန်းသစ်ပြီးတော့ ဂျပန်ရိုးရာ Ingredients တွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့် (၅) မျိုးနဲ့ ကိတ်မုန့် (၃) မျိုး ပါပါတယ်။ ဒီလို ချစ်စရာ ပေါင်မုန့်၊ ကိတ်မုန့်လေးတွေကို ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတာလဲ သိချင်နေကြပြီလား။
✦ ပေါင်မုန့်လေးတွေအတွက်ဆိုရင် ၅ ခုဝယ်ယူတိုင်း ၁ ခု လက်ဆောင်ရရှိမှာပါနော် (T&C applied)။ လုံးဝ ရင်ခုန်စရာပါပဲ!
✦ Hai! Cheese Cake တစ်လုံး ဝယ်မယ်ဆိုရင် ၃၀၀၀ ကျပ်တန် Gift Voucher တစ်စောင် လက်ဆောင်ရယူနိုင်ပြီး
✦ Genki Parmesana Cake ကိုတော့ ၁လုံးထဲဝယ်မယ်ဆိုရင် ၈၈၀၀ ကျပ်ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး ၂ လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ၁၅၀၀၀ ကျပ် နဲ့ပဲရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။
✦ Sakura Cottony Cake ကိုတော့ ၁လုံးထဲဝယ်မယ်ဆိုရင် ၁၃၀၀ ကျပ်ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး ၂ လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ၂၂၀၀ ကျပ် နဲ့ပဲရရှိဦးမှာပါ။
ကဲ…ဒီ Oishii Japan မုန့်လေးတွေကို ၂၀၁၉ ဧပြီလ (၁၉) ရက်နေ့ကနေ ဇွန်လ (၁၃) ရက်နေ့ အထိ ရောင်းချပေးမှာဆိုတော့ မုန့်အသစ်တွေရော Promotion တွေကိုပါလက်မလွှတ်လိုက်ရလေအောင် မြန်မြန်သာအရောက်လာခဲ့ကြတော့ BreadTalker တို့ရေ!
Hello BreadTalkers…. Here comes our most awaiting Oishii Japan Series!!🤩
Made with Japanese unique ingredients, consisting of5cute breads and3delicious cakes, do you guys want to know which promotions are also waiting?
✦ Buy5breads and get 1 free Gift Voucher (T&C applied)
✦ Buy Hai! Cheese Cake and geta3,000 Ks Gift Voucher
✦ Get2Genki Parmesana Cake with total 15,000 Ks (The original price - 8800 Ks for 1 piece)
✦ Buy2Sakura Cottony Cake with total 2,200 Ks (The original price - 1300 Ks for 1 piece)
Then, hurry up and don’t miss this chance to taste those delicious Oishii Japan Series from 19th April to 13th June and get amazing promotions!!
BreadTalk 4nd Birthday Promotion
မတ်လတစ်လလုံးမှာ အပတ်တိုင်း မရိုးနိုင်တဲ့ Promotion တွေ ပြီးသွားတော့ နောက်ဆုံးအပတ်မှာ အထူးအစီအစဉ်လေးလာပါပြီ
အဲ့ဒါကတော့ BreadTalkers တွေ ရဲ့အားပေးအကြမ်းဆုံး Flosss ကို ၁၀ ခုလုံးဝယ်တိုင်း ၂ လုံး FREE လက်ဆောင်ရရှိမယ့် အခွင့်အရေးပါပဲနော်..
ကဲ…နောက်ဆုံး Promotion လေးက (၂၂.၃.၂၀၁၉) ကနေ (၂၈.၃.၂၀၁၉) ထိပဲဆိုတော့ Floss လေးကို အမြန်ဆုံး သွားစားလို်က်ရအောင်နော်
The last promotion for BreadTalk’s 2nd Birthday celebration is all about floss which is our BreadTalkers’ favourite.
Buy 10 floss and get two free between Match 22 and March 28, 2019.
BreadTalk 2nd Birthday Promotion (2nd Week)
Coffee ကြိုက်တဲ့ BreadTalkers တွေအတွက် သတင်းကောင်းပါဗျို့!
BreadTalk ၂နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးရဲ့ ဒုတိယအပတ် Promotion လေးကတော့ Coffee ချစ်သူတွေအတွက်ဖြစ်ပြီး ကော်ဖီ ၂ ခွက် ၀ယ်ယူတိုင်း ၂၀% တောင်လျှော့ဈေးရရှိမှာတဲ့…
ဒီအစီအစဉ်လေးက မတ်လ (၈)ရက်နေ့ကနေ (၁၄) ရက်နေ့ ထိရှိနေမှာမို့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ချစ်ရသူတွေနဲ့ ကော်ဖီတူတူသောက်ပြီး BreadTalk မွေးနေ့လေးကိုပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ပါဦးနော်။
T&C – တန်ဖိုး ၂၃၀၀ ကျပ်နှင့်အောက် သောက်စရာများအတွက်သာ (အအေးဘူး၊ ရေသန့်ဘူးများမပါ)
Good news, coffee lovers: Week two of BreadTalk's birthday promotion is all about coffee! This week, buy2drinks and get 20% off. So haveacup of coffee withaloved one and let's celebrate BreadTalk's 2nd Birthday!
*T&C : This promotion is valid from 8th to 14th March, 2019, and choose drink worth 2,300 Ks and below (exclude bottle drinks)
BreadTalk ရဲ့ Birthday Month ဖြစ်တဲ့ March လ တစ်လလုံးမှာ BreadTalker တွေအတွက် အပတ်တိုင်း ရင်ခုန်စရာ အစီအစဉ်တွေက စောင့်ကြိုနေမှာပါ..
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ BreadTalk ရဲ့ ဘယ် Soft Bun ကိုမဆို ၁၀ ခုဝယ်ယူတိုင်း ၂၀၀၀ ကျပ် လျှော့ဈေးရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်!
*T&C - Soft buns များအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
(၁.၃.၂၀၁၉) ကနေ (၇.၃.၂၀၁၉) အထိပဲရှိနေမယ့် Promotion လေးဆိုတော့ အချိန်မှီ သွားဝယ်လိုက်ကြရအောင်နော်...
နောက်ထပ်အပတ်တိုင်း အပတ်တိုင်းမှာလည်း ဘယ်လို Promotion လေးတွေထပ်ရောက်လာဦးမလဲ ဆိုတာ BreadTalk နဲ့အတူတူ ရင်ခုန်စွာ စောင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်!!
We are celebrating our Birthday Month ‘March’ with exciting weekly promotions for BreadTalkers!
For our first birthday promotion: Buy ten soft buns and get 2000 kyats discount between 1.3.2019 and 7.3.2019.
*T&C - Only for Soft buns
Check back for more awesome promotions in coming weeks as we celebrate our second year!
Hello! အချစ်နေ့ရက်တွေကို BreadTalk နဲ့ ပုံဖော်လုိုက်ရအောင်နော် …
Salted Carmel Pistachio Delight နဲ့
Chocolatey Heart ကိတ်လေးတွေက Valentine’s Day အတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကိတ်မုန့်တွေဖြစ်ပြီး တစ်လုံးကို ၁၈၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်သလို တစ်လုံးဝယ်ယူတိုင်းမှာ ချစ်ရသူနဲ့အတူတူ ချိုမြိန်စွာသောက်သုံးနိုင်မယ့် ချောကလက် ၂ ခွက် လက်ဆောင်ရဦးမှာနော်။
(Pre Order လုပ်မယ်ဆို ၃ ရက်ကြိုမှာဖို့တော့ လုိုမယ်နော်)
ကိတ်လေးတွေက ဖေဖော်ဝါရီလ (၁)ရက်နေ့ ကနေ (၁၄)ရက်နေ့ ထိပဲရှိမှာဆိုတော့ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ နှစ်ယောက်အတူရှိချိန်တွေကို ပိုချိုမြိန်သွားဖို့ အခုပဲသွားဝယ်လိုက်တော့နော်.....
Hello! Let’s shape the love days with BreadTalk.
‘Right Beside You’, ‘Salted Carmel Pistachio Delight’ and Chocolatey Heart’ are Valentine’s Day special cakes which cost 18000 Kyats per each and you will get2cups of sweet and delicious Chocolate drinks for free to drink together with your love.
(Don’t forget that Pre-orders must be placed at least3days in advance)
Let’s go to BreadTalk quickly to have sweeter memories together with your love, as those cakes are only available from February 1st to February 14th.
BreadTalk ကနေ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ပေါင်မုန့်အသစ် (၅) မျိုးနဲ့ ကိတ်မုန်အသစ်လေး (၁) မျိုးက မတူကွဲပြားတဲ့ ဒီဇိုင်း၊ အရသာကိုယ်စီနဲ့ ဘော်ဒါတွေရင်ထဲ ထိစေဦးမှာပါ။
BreadTalker တွေအတွက် မရှိမဖြစ် Promotion လေးတွေကတော့…
Berry Lucky နဲ့တွဲဖက်ပြီး Strawberry Soda (သို့) သောက်သုံးစရာ (အပူ) တစ်ခုပါဝင်တဲ့ Bundle Set လေးကိုမှာယူရင် စုစုပေါင်း ၃ဝဝဝ ကျပ်သာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး Berry Blossom (သို့) Berry Blissful တစ်ခုနှင့် Strawberry Soda (သို့) သောက်သုံးစရာ (အပူ) တစ်ခုပါဝင်တဲ့ Bundle Set လေးကိုဆိုရင်တော့ ၄ဝဝဝ ကျပ်ဖြင့်သာ ၀ယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။
*(Promotion နှစ်မျိုးလုံးအတွက် သောက်သုံးစရာ (အပူ) ကတော့ ကျပ် ၂၃ဝဝနှင့် အောက် ဖြစ်မှရမှာပါနော်)
ဒါတင်မကပဲ … အလွန်အရသာရှိပြီး နူးအိလွန်းတဲ့ Wolfberry Honey Cake တစ်လုံးကို ကျပ် ၁၂ဝဝဝ နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး (၂) လုံး ဝယ်ယူရင် ကျပ် ၂ဝဝဝဝ သာကျသင့်မှာပါနော်။
မုန့်လေးတွေကိုတော့ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်ကနေ ဖေဖေ်ာဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့ထိ ပဲရနိုင်တာဆိုတော့ ဘာလို့ အချိန်တွေ ဆွဲနေဦးမှာလဲ BreadTalkers တို့ရေ …
5 breads and 1 cake with unique design and delicious taste which produce for Chinese New Year will be attracting all of BreadTalkers again.
Also there are special promotions for BreadTalkers which consist of ….
Ordering Bundle Set which include Berry Lucky with Strawberry Soda (or) hot drinks with 3000 Kyats and …..
Ordering another Bundle Set which include Berry Blossom (or) Berry Blissful with Strawberry Soda (or) hot drinks with 4000 Kyats.
*(For each promotions, choose drinks worth 2300 Kyats and below)
And have delicious and softy Wolfberry Honey Cake with 12000 Kyats forasingle piece and 20000 Kyats for two pieces.
Don’t waste your time as those delicious and cute breads and cakes are only available from January 15 to February 19.
for Many to Share
BreadTalk ကနေ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Mini Series ထဲက Mini Flosss, Mini Croissants, Mini Cubs နဲ့ Mini Cakes လေးတွေကို မှတ်မိကြဦးမှာပါနော်။
- Mini Flosss ထဲက Golden Lava Flosss ဆိုရင် လျှာပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ အရသာထူးခြားလွန်းတဲ့ BreadTalk ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး အသားမျှင်ပေါင်မုန့်တစ်ခု
- Mini Croissants ဆိုရင် ချစ်စဖွယ်ပုံစံလေးနဲ့ စုံစုံလင်လင်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးဆန်းသစ်ထားတဲ့ အရသာ(၆)မျိုး
- Mini Cubs မှာ ဆိုရင် သူ့ရဲ့ထူးခြားမှုက အရောင်ပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲထားတဲ့ အရသာ(၄)မျိုးနဲ့ Beary ကိတ်လေးတွေ
- Mini Cakes ဆိုရင် အရောင်စုံလို့ ဓာတ်ပုံစားတဲ့ Rainbow Bliss ကိတ်လေးတွေလို့တောင် ပြောရတဲ့အထိ Mini Series ရဲ့ မုန့်အသစ်လေးတွေကထူးခြားပါတယ်။ BreadTalker တို့လည်း ဒီ Min Series ကို မြည်းစမ်းကြည့်ပြီးလောက်ပြီ ဆိုတော့ ဘယ်မုန့်ကို အကြိုက်ဆုံးလဲ ဆုိုတာ ကွန်မန့်မှာ ပြောပေးခဲ့ကြပါဦး။
ဒါနဲ့ ဒီ Mini Series က အောက်တိုဘာ (၃၁) ထိပဲ ရှိမှာမို့လို့ လမကုန်ခင် BreadTalk ကို အမြန်ဆုံး သွားလိုက်ကြရအောင်။
All about the Mini Series! Love the Mini Flosss! Enjoy the Mini Croissants’ flavors! Face the Mini Cubs! Snap the Mini Cakes! Together, all these new mini offerings leaveamighty big impression in fun and flavor! Be sure to try them out while they last! Yes! They are only available until October 31! So hurry, dear BreadTalkers!
#BreadTalkMyanmar #MiniSeries #ForManyToShare
လူတွေမှာပဲ ဓာတ်ပုံစားတယ် ရှိတာ မဟုတ်ဘူးနော်၊ BreadTalk ရဲ့ Mini Series ထဲက Rainbow Bliss လေးတွေကလည်း ဓာတ်ပုံစားချက်ပဲ။
အရောင်စုံလေးတွေနဲ့ Rainbow Bliss လေးတွေက လှလွန်းလို့ စားလိုက်ရမှာတောင် နှမျောစရာ။ ဒါပေမယ့် စားလိုက်တော့လည်း အရသာက အမြင်ထက် ပိုပြီးတောင် အမိုက်စားဖြစ်နေပြန်ရော။ မနောက်ဘူး၊ အတည်ပြောတာနော်။
BreadTalker တို့လည်း Mini Seriesရဲ့ မုန့်အသစ်လေးကို အမြန်ဆုံး မြည်းကြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
BreadTalk’s mini cakes are so photogenic, they’re ready for your snapshots before you enjoy their delicious variety! Of course, they’d taste just as good as they look! Have you tried them yet? Snapabite from any of our outlets today!
#BreadTalkMyanmar #MiniSeries #MiniCakes
BreadTalk ထဲ ဝင်လိုက်လို့၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဝက်ဝံရုပ်ပုံစံ မုန့်ကို တွေ့ပြီဆိုရင် အဲဒါ Beary လေးတွေပါပဲ။ BreadTalk ရဲ့ Mini Series ထဲက Mini Cubs မှာ Berry, Forest, Snow နဲ့ Matcha အရသာ (၄) မျိုးတောင်ရှိပါတယ်နော်။
ကဲ.. ဘယ်ဝက်ဝံလေးကိုရွေးမလဲဆုိုတာကတော့ BreadTalker တို့ သဘောပေါ့နော်။ ပြီးတော့ Beary (၃) ခုဝယ်ရင် (၁) ခု ရနိုင်တဲ့ ပရိုမိုးရှင်းကလည်း ရှိသေးတယ်။ BreadTalk ရောက်ရင် Mini Series ထဲက ထူးခြားတဲ့ တခြားမုန့်အသစ်တွေရဲ့ အရသာလေးတွေကို မြည်းစမ်းဖို့လည်း မမေ့နဲ့ဦးနော်။
MINI CUBS HAVE ARRIVED!
Our newest cutesy Beary awaits to delight you with their colorful bear faces! Buy three and taste all four flavors of Berry, Forest, Snow and Matcha by getting one for free. Our Mini Series just keeps getting more exciting! Try them all at BreadTalk today!
#BreadTalkMyanmar #MiniSeries #MiniCubs
Mini Series aemထဲက Mini Croissants အသစ်လေးတွေ ထပ်ရောက်လာပြန်ပြီ။ အရသာကလည်း (၆) မျိုးတောင်၊ ပုံစံလေးတွေကလည်း ချစ်စရာလေးတွေ။ ဘယ်လိုလဲ… ပုံလေးတွေ ကြည့်ရတာနဲ့ BreadTalker တွေ အရသာအသစ်လေးတွေကို စားချင်နေပြီဟုတ်???
ဒါနဲ့ အရသာအသစ်လေးတွေနဲ့အတူ ပရိုမိုးရှင်းတွေလည်း ရှိတာမို့ BreadTalk ကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့ကြပါနော်။
Remember our Mini Croissants? We’re adding more excitement and flavors to the mix! Experience over6new flavors, but that might be difficult since they’re too pretty to eat! We are pretty sure you’ll enjoy them all the same! By the way, the new flavors are awaiting you with more exciting promotions, and thus, please come and enjoy at our BreadTalk!
#BreadTalkMyanmar #MiniSeries #MiniCroissants
Minis Series ထဲက အသစ်ထွက်လာတဲ့ Mini Flosss လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်။BreadTalkရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး အသားမျှင်ပေါင်မုန့်တွေဖြစ်တာမို့ တစ်ကိုက် ကိုက်လိုက်တာနဲ့တင် လျှာပေါ်မှာ ထူးခြားတဲ့ အရသာသစ်လေးကို ခံစားရမှာပါနော်။ အရင် Flosss တွေထက် ထူးခြားတာကတော့ အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်ပြီးသား ဘဲဥငန်အနှစ် ပါဝင်တဲ့ Golden Lava Flosss လေးဖြစ်နေတာပါပဲ။BreadTalk မှာ ချန်ပီယံအသစ်လေးဖြစ်လာမယ့် မုန့်လေးကို အမြန်ဆုံးလာပြီး မြည်းစမ်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Officially launching Mini Flosss from Mini Series for the first time!!!!
BreadTalk’s signature Flosss Buns, withaperfect combination of Golden Lava in every bite you take is the new champion going to be. Ready to witness this exciting moment of Golden Lava Flosss?
Edible Spring Garden Product Series ထဲက နောက်ထပ်အသစ်လေးကတော့ Crater Cheese Honey Cake လေးပါပဲနော်။ ဒီကိတ်မုန့်လေးရဲ့အလယ်ဗဟိုအထိ စူးစမ်းရှာဖွေမယ့် ခရီးစဉ်ကတော့ ပျားရည်အနည်းငယ်ပါတဲ့ ကိတ်သားပေါ်မှာ ပေါက်ထွက်လာမယ့် ခရင်မ်ဖြည့်ထားတဲ့ ချိစ် အရသာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိုနဲ့ အငန် အရသာတွေက လှလှပပ တိုက်မိသွားကြရာက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပေါက်ကွဲမှုလေး တစ်ခုပဲပေါ့။ ဒီလိုဆန်းကျယ်တဲ့အရသာမျိုးကို လက်လွှတ်လိုက်ရရင်တော့ သိပ်မှားသွားမယ်နော်။
Last but not least would be our yummy Crater Cheese Honey Cake from Edible Spring Garden Products Collection. Let us take you to the journey to the centre of the crater and unearth the eruptive taste of caramelised cheese atopalight honey sponge cake. This explosive fury of sweet and savoury flavours will enlighten your day!
Edible Spring Garden နွေဦးမုန့်အသစ်တွေထဲက နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ Pumpkin Toast နဲ့ Mountain Green Tea Toast ဆိုတဲ့ Toast တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pumpkin Toast လေးက အံ့သြဖို့ကောင်းလောက်အောင် ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေများတဲ့အပြင် Mountain Green Tea Toast လေးကလဲ ဂျပန်စတိုင်စစ်စစ် အရောင်စိုစိုနဲ့ ပေါင်မုန့်လေးရအောင် လက်ဖက်စိမ်းအမှုန့်နဲ့ ပဲနီလေးတွေ ရောစပ်ထားပြီး သန့်စင်တဲ့ သဘာဝကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေချည်းပဲ သုံးထားတာကြောင့် အားရပါးရသာ စားပစ်လိုက်တော့နော်။
Looking for something healthy and delicious? Here, BreadTalk brings another healthy product series from Edible Spring Garden Products Collection, which is our Healthy Toast! With its rich taste and healthy benefits, both Pumpkin Toast and Mountain Green Tea Toast are all you need for breakfast and snacks time! Absolutely original, pure natural goodness that you can relish!
Edible Spring Garden Product Series ထဲက နောက်ထပ်မုန့်အသစ်လေးတွေကတော့ Strawberry Bliss ဆိုတဲ့ ချိစ်နဲ့ စတော်ဘယ်ရီ mousse ခရင်မ်တွေကို ဗီနီလာအနံ့သင်းသင်းလေးပါတဲ့ ချီဖွန်ကိတ်သားနဲ့အတူ တမူထူးခြားစွာ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ကိတ်လေးရယ်၊ Matcha နဲ့ Honey Yuzu ဆိုတဲ့ အရသာနှစ်မျိုးရှိတဲ့ Mochi Matcha Roll နဲ့ Honey Orange Roll ဆိုတဲ့ Hokkaido နှင်းဖြူကိတ်မုန့်လိပ်အသစ်လေးတွေပါပဲ။ ကိတ်မုန့်လိပ်လေးနှစ်မျိုးထဲက ကြိုက်ရာနှစ်မျိုးဝယ် ၉၅၀၀ ကျပ်ပဲ ကျသင့်မှာဖြစ်တဲ့ ပရိုမိုးရှင်းလေးလဲရှိတယ်ဆိုတာ မှတ်ထားလိုက်ပါဦးနော့!
Here comes another products series from Edible Spring Garden Products Collection!! The unique blend of aromatic vanilla chiffon cake with cheese mousse and strawberry mousse in Strawberry Bliss will melt your not only tongue but also your heart. The two new refreshing rolls made with Matcha and Honey Yuzu respectively will make you immersed in its softness, where you can get both at 9,500 Ks also! Nothing can be softer, sweeter and yummier than this product series!!
BreadTalk ရဲ့ Edible Spring Garden နွေဦးမုန့်အသစ်လေးတွေ နွေရာသီနဲ့အတူ ဖူးပွင့်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါပြီ! မုန့်အသစ် (၁၄)မျိုးထဲမှ ပထမဆုံး ပေါင်မုန့်သစ်လေးတွေနဲ့ သူတို့တွေမှာရှိတဲ့ Promotion တွေကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေနော်...Lazy Bug, Foccacia Tomato Mushroom နှင့် Coconut Promise သုံးမျိုးထဲက ကြိုက်ရာ ၃ ခုဝယ်ရင် (၃၂၀၀)ကျပ်၊ Golden Pumpkin, Lemon Leaf နှင့် Abundance သုံးမျိုးထဲမှ ကြိုက်ရာ ၃ မျိုးဝယ်ရင် (၃၅၀၀)ကျပ်ပဲ ကျသင့်မှာဖြစ်တဲ့ Promotion လည်းရှိပြီး Sunrise Surprise နှင့် Tomato Tingler တို့ကို (၁၄၀၀)ကျပ်နဲ့ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခု မုန့်သစ်တွေကို မတ်လ (၁၅)ရက်နေ့ မှ မေလ (၉)ရက်နေ့အထိပဲ ရောင်းချပေးမှာဆိုတော့ အမြန်သာလှမ်းလာခဲ့လိုက်တော့နော်။
The new Edible Spring Garden products series are on shelves today! Out of 14 new products, let us introduce the Buns and Danish product group and its promotions! Buy any of Lazy Bug, Foccacia Tomato Mushroom, and/or Coconut Promise at 3,200 Ks, while any3from Golden Pumpkin, Lemon Leaf and/or Abundance @ 3,500 Ks. Both Sunrise Surprise and Tomato Tingler @ 1,400 Ks each. The products are limited edition only and it will be available only from 15th Mar to 9th May!!
BreadTalk ကနေ တရုတ်နှစ်ကူးအတွက် အသစ်ထွက်မယ့် မုန့်လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ အချိန်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ Fortune Puppy၊ Mandarina Luck ၊ Bak Kwa Treasures နဲ့ Yummy Ingot ဆိုပြီး မုန့်အမျိုးအစား(၄) မျိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ BakKwa Treasures (၃) ခုဝယ်ရင် (၅၀၀၀) ကျပ်၊ Yammy Ingot , Fortune Puppy နဲ့ Mandarina Luck တို့ကိုတော့ (၃) ခုဝယ်ရင် (၃၅၀၀) ကျပ် နဲ့ ရရှိမှာပါ။ မုန့် (၉) ခုနှင့် အထက်ဝယ်ယူတိုင်းကိုလဲ မုန့်ထည့်စရာ Box လေးတစ်ခု လက်ဆောင်ပေးဦးမှာပါ။နှစ်ကူးအတွက် သီးသန့် ထုတ်ထားတဲ့ မုန့်လေးတွေ က အမြင်မှာတင် သရေယိုစရာ မဟုတ်ဘဲ အရသာမှာလည်းအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေနဲ့ လုပ်ထားလို့ တွေဝေမနေပဲ BreadTalk ကို အမြန်ဆုံး လာစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေနော်။
Here we come with these new super delicious foods for your mouthful chewing. There are four new members namely Fortune Puppy, Mandarina Luck, Bak Kwa Treasures and Yummy Ingot. Asaspecial promotion, buy3BakKwa Treasures for 5,000Kyats and for Yammy Ingot, Fortune Puppy, and Mandarina, one can get3of these for only 3,500Kyats. You will getapacking box if you purchase above9pieces.
တနင်္လာနေ့တိုင်း ခံစားနေရတဲ့ မအီမသာမှုတွေကို ပျောက်ဆုံးစေဖို့အတွက် BreadTalk မှ Energy Monday အစီအစဉ်လေး ရောက်လာပြီနော်..ဒီအစီအစဉ်လေးမှာ Rice Chiffon, Japan Light Cheesecake တို့ကို ပုံမှန် ၈,၈၀၀ ကျပ်၊ Hokkaido Rice Roll ကို ပုံမှန် ၉,၀၀၀ ကျပ်တွေကနေ အထူးဈေးနှုန်းအနေနဲ့ ကြိုက်တဲ့ကိတ်အမျိုးအစား ၂ ခုဝယ်ယူရင် ၁၂၀၀၀ ကျပ်တည်းနဲ့ ရရှိတော့မှာနော်..အပတ်စဉ်တိုင်းရဲ့ တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာရောင်းချပေးသွားမှာဆိုတော့ တစ်နေကုန်စွမ်းအင်အပြည့်နဲ့ အားပြည့်အောင် စားဖို့ရယ်ဒီသာလုပ်ထားလိ်ုက်ပေဦးတော့ ချေ့သဲတို့။
Here is Energy Monday promotion for our lovely BreadTalk fans whose Mondays are too blue! Get any two of Rice Chiffon, Japan Light Cheesecake and Hokkaido Rice Roll with just 12,000 Kyats only!
Refill your body and brain with these awesome cakes and gain energy for the whole week!!
Too awesome to miss this Energy Monday!!
ခရစ္စမတ်မှာ ချစ်ခင်ရသူတွေကို ချိုမြိန်ခြင်း လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက် BreadTalk ရဲ့ Ho Ho Ho ကိတ်လေးလာပါပြီ။ ဒီကိတ်လေးကိုတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ကနေ ၂၅ရက်နေ့ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Ho Ho Ho ကိတ်လေးကိုတော့ ၂၀၈၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဒီကိတ်လေးဝယ်ရင် BreadTalk ရဲ့ Limited Edition ခွက်လေးတစ်ခွက်ကို ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်အဖြစ် ပြန်ပြီး ပေးသွားဖို့အစီအစဉ်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလိုဆို ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်တဲ့ ခရစ္စမတ်ချိန်ခါလေးမှာ ကိုယ်မြတ်နိုးရသူတွေကို Ho Ho Ho ကိတ်လေးလက်ဆောင်ပေးရင်း ပျော်စရာအချိန်တွေအတူဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။
In this great time of Christmas, Ho Ho Ho cake is here in BreadTalk and ready to serve you asasweet present. It is only available to buy from December 4th to December 25th. Ho Ho Ho cake has reasonable price of 20800 MMK and if you buy it, you can collectamemorable Christmas Mug asagift from BreadTalk. So, please come to BreadTalk, grab some Ho Ho Ho Cake, transform them into the presents which meanalot to your beloved ones. Haveablessed Christmas with your family, lovers and people who you care…
Better Choclate than Never
BreadTalk ရဲ့ အသစ်ထွက်လာမယ့်မုန့်တွေကို အဓိကလုပ်ထားတာက ချောကလက် ပါနော်။ ပြီးရင် ဒီဇင်ဘာလရော ပရိုမိုးရှင်းမလုပ်ဖူးလားဆိုပြီး မေးနေကြတဲ့ BreadTalk ချစ်သူတွေအတွက် ဒီဇင်ဘာပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်လေးလည်း လာပါပြီ။ Chocolate Series ထဲက Cocoa Teddy ၊ Choc Aleck နဲ့ Chocolate Cream Cheese သုံးမျိုးကို ၃၉၀၀ ကျပ်ပဲကျသင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ချောကလက်ကြိုက်တဲ့ ချစ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်တော့ ရှယ်ပဲပေါ့။ ပြီးတော့ ကိတ်မုန့်ပဲဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်း Chocolate Series ထဲက သုံးမျိုးကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ခါ ပေါင်မုန့်ဝယ်ယူတဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်မယ့် ၃၀၀၀ ကျပ် discount ကူပွန်တစ်စောင်ပါလက်ဆောင်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုမိုးရှင်းကတော့ ခုဒီဇင်ဘာ ၁ရက်နေ့ကနေ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့အထိပဲမို့ နောက်ကျသွားမှာစိုးလို့ အမြန်လာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်နော်။
Here isaDecember promotion for BreadTalk fans. Get Cocoa Teddy, Choc Aleck and Chocolate Cream Cheese buns for just 3,900 kyats. And every purchase of any cake from Chocolate series comes witha3,000 Kyats voucher for buns on next purchase. This promotion starts from 1st of December 2017 till the end 25th January, 2018, so come quickly.
BreadTalk Junction Square Opening
BreadTalk ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲက နိုဝင်ဘာလို ၉ ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်သွားမှာပါ။ ထူးထူးခြားခြားလေးတွေလည်း BreadTalk ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၉ရက်နေ့ကနေ ၃၀ ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး Junction Square, Crystal Tower မှာရှိတဲ့ BreadTalk ဆိုင်အသစ်မှာ ၁သောင်းနဲ့ ၁သောင်းဖိုးအထက်ဝယ်ယူရင် Lucky Draw နှိုက်ပြီး လက်ဆောင်လေး တွေရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး ဆုလက်ဆောင်လေးတွေကတော့ Tote Bag, BreadTalk LED Fan, BreadTalk Shirt နဲ့ BreadTalk Cup တွေပါ။ နောက် ထူးထူးခြားခြားတစ်ခုက BreadTalk ကိုချစ်တဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးတွေအတွက်ပါ။ ကျောင်းသားကဒ်လေးပြပြီးဝယ်တဲ့အခါ BreadTalkရဲ့စားကောင်းလွန်းတဲ့ Spring in the city နဲ့ Mogu Mogu (နှစ်မျိုးပေါင်း) ကို ၁၈၀၀ ကျပ်နဲ့ဝယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Snow white Yam နဲ့ Mogu Mogu၊ Pink salt roll နဲ့ Mogu Mogu (တစ်တွဲ) တို့ကိုတော့ ၁၅၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။
BreadTalk’s second outlet will be opening on 9th November at Junction Square Crystal Tower. But that’s not all. To commemorate our grand opening, we have Lucky Draw activity for every customers who purchase more than 10,000 MMK. We have BreadTalk limited edition prizes such as Tote Bags, LED Fans, Shirts and Cups. If you areastudent, we have bundling promotion such as Spring In the City and Mogu Mogu at 1,800 MMK. You can also bundle Snow White Yam and Mogu Mogu or Pink Salt Roll and Mogu Mogu at 1,500 MMK. Remember to bring your student ID cards. See you there!
Thadingyut Special Cake Box
BreadTalk’s special Thadingyut cake boxes are available from Oct 1- 15! These special gift packets each contain four steam cakes and one cake roll. The four steam cake flavors are Marble, Orange, Strawberry, and Matcha. For the cakes, you may choose any roll from Hokkaido series (Snow Roll, Choco Roll or Rice Roll) and Memoirs of Sakura from Ohaiyo Japan Series. Cake box with Hokkaido Roll series will be 15,000 Kyats while with Memoirs of Sakura will be 16,500 Kyats respectively. Grab your share as soon as possible since it is limited stocks only!!!
သီတင်းကျွတ်ကာလလေးမှာ ကိုယ့်ရဲ့လူကြီးမိဘ၊ ဆရာသမားတွေကို ဘာနဲ့ ကန်တော့ရမှန်းမသိသေးရင်တော့ မပူပါနဲ့တော့နော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ BreadTalk က သီတင်းကျွတ်အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ Cake Box လေးတွေစီစဉ်ထားလို့ပါပဲ။ သီတင်းကျွတ် Cake Box လေးတွေကို အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့ကနေ (၁၅)ရက်နေ့အထိရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး Cake Box လေးထဲမှာပါဝင်တာတွေကတော့ Steam Cake (၄)လုံးနဲ့ Cake Roll (၁)လုံးတို့ပါပဲ။ Steam Cake (၄)လုံးကတော့ Marble, Orange, Strawberry နဲ့ Matcha တို့ဖြစ်ပြီး Cake Roll ကိုတော့ Hokkaido Snow, Hokkaido Rice, Hokkaido Choco Roll နဲ့ Memoirs of Sakura အစရှိတဲ့ Roll တွေထဲက တစ်မျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။ Hokkaido roll နဲ့ Cake Box တွေကို ၁၅၀၀၀ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်သလို Memoirs of Sakura Cake Box ကတော့ ၁၆၅၀၀ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတာမို့ တန်လည်းတန်၊ အရသာလည်းကောင်းတဲ့ Cake Box လေးတွေကို ဒီသီတင်းကျွတ်မှာ မြန်မြန်ဝယ်ပြီး လူကြီးတွေကို ကန်တော့လိုက်ပါလို့ အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
Ohaiyo Japan 2017
We are here to introduce you the two types of pastries in this Series. We call them “Miss Sakura” and “The Rising Star” – they are not only distinct in appearances, but also unique in their Japanese-inspired flavoring. Trust us, you will not be able to stop and want to try more and more. You can buy (2) Rising Star pastries with only 2000 MMK instead of the original price of 2400 MMK and buy (3) Miss Sakura with 3500 MMK instead of 3900 MMK. Warmly welcome to visit BreadTalk to try our special for Ohaiyo Series.
Ohaiyo Series ထဲမှာပါတဲ့ ပြောပြဖို့ကျန်နေတဲ့ Pastries တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးရဦးမယ်။ Miss Sakura နဲ့ The Rising Star လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ မုန့်လေးတွေက အမြင်မှာတစ်မျိုးဆန်း နေရုံမဟုတ်ပဲ စားပြီးရင်လည်း ထပ်စားချင်နေတုန်း ဖြစ်သွားဦးမှာ။ ရောင်းချပေးမှာက စက်တင်ဘာ(၂၁)ရက်နေ့ကနေ နိုဝင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့ထိဖြစ်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းလေးကတော့ The Rising Star ကို၂လုံးဝယ်ရင် မူရင်းဈေး ၂၄၀၀ကျပ် ကို ၂၀၀၀ကျပ် နဲ့ရမှာဖြစ်ပြီး Miss Sakura ကိုတော့ ၃လုံးဝယ်ရင် ၃၉၀၀ကျပ် ကို ၃၅၀၀ကျပ် နဲ့ရမှာပါ။ လာစားကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Any cake lovers out there? BreadTalk would like you to try the “Hai! Cheese” cakes from Ohaiyo series, which will melt in your mouth as they are very sweet and squashy. Their looks also represent Japan with their beautiful and sweet cherry color along with the extra smoothness texture made with Hokkaido milk. These new products will be in store on Sep 21 to Nov 15 and you can also geta3000 MMK gift voucher if you purchase Hai! Cheese Cake.
ကိတ်ချစ်သူတို့ရေ အရသာကောင်းကောင်းနဲ့ လျှာပေါ်မှာ ပျော်ဝင်သွားမယ့် ကိတ်သားနုနုလေးတွေနဲ့ ကိတ်မုန့် လည်း Ohaiyo Series မှာပါသေးတယ်။ ဂျပန်ရဲ့အငွေ့အသက်တွေရှိတဲ့ ချယ်ရီပန်းရဲ့အရောင် ပန်းရောင်လေးနဲ့ ကိတ်လေးတွေရဲ့ နာမည်လေးက Hai! Cheese ပါတဲ့။ ပုံမှန်ကိတ်သားတွေထက် ပိုမိုနူးညံ့နေတာကတော့ Hokkaido Milk ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပါနော်။ ရောင်းချပေးမှာက စက်တင်ဘာ(၂၁)ရက်နေ့ကနေ နိုဝင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့ထိဖြစ်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းလေးကတော့ Hai! Cheese Cake တစ်လုံးဝယ်ရင်တော့ (၃၀၀၀) ထောင်တန် Gift Voucher လေးကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Let us introduce about Buns from Ohaiyo Series. The name of these cute buns are Matcha Red Bean, Oh! Konomiyaki, Bacon Kushiyaki, Tuna Chikuwa, Tuna Edamame and Ms Berry Blossom. These are delight treats for all of sweet lovers and meat lovers because of its variety of choices. These new products will be in store on Sep 21 to Nov 15. Get (1) Free Bun if you buy any (5) buns from the Ohaiyo Series and don’t forget to grab them before it's gone!
Ohaiyo Series ထဲမှာပါတဲ့ Buns လေးတွေကတော့ Matcha Red Bean, Oh! Konomiyaki, Bacon Kushiyaki, Tuna Chikuwa, Tuna Edamame နဲ့ Ms Berry Blossom ပါတဲ့။ ရွေးစရာ အမျိုးအစားက (၆)မျိုးတောင်ဆိုတော့ အချိုပဲစားစား၊ အသားအရသာပဲ ရွေးမလား အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ရောင်းချပေးမှာက စက်တင်ဘာ(၂၁)ရက်နေ့ကနေ နိုဝင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့ထိဖြစ်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းလေးတော့ Ohaiyo Series ထဲက Buns (၅)လုံးဝယ် (၁)လုံးလက်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်လေးရှိတဲ့အတွက် လာစားကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။
အပြင်က အခွံ ကြွပ်ကြွပ်ရွရွလေးနဲ့ အထဲက ဆားဘဲဥလေးက လိုက်လွန်းလို့ တစ်ကိုက်လေး စားလိုက်တာနဲ့ ထပ်ထပ်စားချင်သွားစေရမယ်။ ဒီအပြင်(၅) ခုဝယ်ရင် (၁) ခု လက်ဆောင်ရဦးမယ့် Promotion လည်း ရှိနေတယ်ဆိုတော့ ဘာလိုသေးလဲ။